ရက္ခိုင့်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ, Pheksim, Bangkok (2021)
ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ရက္ခိုင့်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ, Pheksim, Bangkok.
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ဧပြီလ (၂၈ သို့မဟုတ် ၂၉) ရက်နိခန့်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ နတ်ကျောက်ဆရီမြို့နယ်၊ "အင်းသုံးဆယ်"ရွာအတွင်းသို့ ဘက်တံဆိပ်တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိသော ပြောက်ကျားအစိမ်းကွက်ယူနီဖောင်း၊ဗမာစစ်တပ်ဝတ်ယူနီဖောင်းများကိုဝတ်ဆင်၍ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်(AA)က ဟုပြောဆိုပြီး AA အကွန်ဆောင်၍ဆက်ကြေးငွီများကောက်ခံလားကြောင်းသိဟိရသည်။
ဂနိ မေလ (၄) ရက်နိ၊ညဇာသား (၈) နာရီ၊လက်ဟိနောက်ဆုံးရသတင်းအရ ၎င်းဆက်ကြေးကောက်အဖွဲ့သည် အင်းသုံးဆယ်အနီးရှိ "ဂရမ်ပါရာ"(ရွာ) အနီး၌အရပ်ဝတ်များဖြင့်ရောက်ဟိနီကြောင်းသိဟိရသည်။ မိမိရို့အနီဖြင့် အနီးကပ်စောင့်ကြည့်လျှက်ဟိပြီး လွန်ခသောနှစ်ကြိမ်အဖြစ်မျိုးအား ထပ်မံကျူးလွန်မည်ဆိုပါက ထိုက်တန်သောပြုလုပ်မှုမျိုးကိုလုပ်ဆောင်လားမည်။
၎င်းအပြင် ရခိုင်ပြည်အတွင်း၌လည်း တချို့သည် ရက္ခိုင့်တပ်မတော် (AA) အားခုတုံးလုပ်ငွီကြေးကောက်ခံနီသည်များကိုတွိဟိနီရသည်။ မိမိရို့ အနီဖြင့် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၊ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များအားသီးသန့်ငွီကြေးကောက်ခံစေလွှတ်ထားခြင်းမျိုးမဟိပါ။ (ခြွင်းချက်အချို့မှလွဲ၍) ထို့ကြောင့် ULA/AA ထံသို့အမှန်အကန်ထည့်ဝင်လိုသူများအနီနန့်သီခြာစစ်ဆီးစုံစမ်းစီလိုပါသည်။ မိမိရို့ အနီဖြင့် မိဘပြည်သူရို့ ၏ချွေးနဲစာများကို လိမ်လည်ကောက်ခံလားသူများအား ၎င်းရို့ နန့်ထိုက်တန်သည့် ပြုလုပ်မှုမျိုးကို လုပ်ဆောင်လားမည်ဖြစ်သည်။
တိုက်ပွဲသတင်း နှင့် ဘင်္ဂလာ-ရခိုင်နယ်စပ်စစ်ဘေးရှောင်သတင်း
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့တွင်ဘင်္ဂလာ-မြန်မာနယ်စပ်၊ ပလက်ဝမြို့ နယ် အနီးအနားတဝိုက်၌ရက္ခိုင့်တပ်မတော်၏တပ်မဟာ (၃) ၊စစ်ဗျူ ဟာ (၂) လက်အောက်ခံ၊ တပ်ရင်း (၃၁၄) နှင့် မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်၏တပ်ရင်း (အမည်စစ်ဆေးဆဲ)တို့သည် နံနက် (၁၁) နာရီမှ နေ့လည်(၁) နာရီအတွင်း သုံးကြိ်မ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
တိုက်ပွဲသည် ယနေ့၌ဖြစ်ပွားသော်လည်းနိုဝင်ဘာလကတည်းကပင် မိမိတို့နှစ်ဖွဲ့အကြားတွင် စစ်ရေးတင်းမာမှုများရှိခဲ့ပြီးရက္ခိုင့်တပ်မတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်များလှုပ်ရှားသည့်နယ်မြေများအတွင်းသို့ အင်အားအများအပြားသုံးကာဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့သည့်အပြင် လက်နက်ကြီးများဖြင့် ထင်ရာစိုင်းပစ်ခတ်မှုများရှိခဲ့သည်။ထို့အပြင် ရွာသားများပိုင်ဆိုင်သည့်စပါးကျီအချို့အားလည်းယုတ်မာစွာဖျက်ဆီးခဲ့သလိုသစ်ခုတ်၊ဝါးခုတ်သမား(၂၀)ကျော်တို့အားလည်းမတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့သည်။
လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အထက်ပီ၊အောက်ပီရွာများမှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသည့် ရခိုင်လူမျိုးများနှင့်ရခိုင်မျိုးနွယ်စုများအရေအတွက် (၂၀၀)နှစ်ရာနီးပါးအားမိမိတို့ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA အနေဖြင့် စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများအပြင် လိုအပ်ချက်များထဲမှ တတ်နိုင်သည်များကိုကူညီစောင့်ရှောက်ပေးထားခဲ့သည်မှာ တစ်လ ကျော်တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဆက်လက်၍ လည်းစစ်ဘေးရှောင်ရခိုင်လူမျိုးများထပ်မံများပြားလာဖွယ်ရှိသည်။
ယခုအချိန်ကာလသည်ဆောင်းရာသီကာလဖြစ်၍ အနွေးထည်၊စောင်များလိုအပ်လျှက်ရှိပြီး စားနပ်ရိက္ခာအချို့ လည်းလိုအပ်လျှက်ရှိသည်။ အမျိုးသားရေးအသိတရားဖြင့်ကူညီပံ့ပိုးလိုသူများအနေဖြင့် နီးစပ်ရာ ULA တာဝန်ခံများမှတဆင့်ထည့်ဝင်နိုင်ပါကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်။
နိုဝင်ဘာ၊ဒီဇင်ဘာ နှစ်လအတွင်းကြိုကြားကြိုကြားတိုက်ပွဲများရှိခဲ့သည်။ တိုက်ပွဲအတွင်း မိမိတို့ဖက်မှ ရဲဘော်တစ်ဦး တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက်အသက်ပေးဆပ်သွားခဲ့ရပြီးနောက်တစ်ဦးမှာ အလတ်စားဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ရန်သူ့ဖက်မှ ၁၀ ဦးကျော်ကျဆုံးခဲ့သလို ဒဏ်ရာရသူများလည်းရှိခဲ့ကြောင်း ခိုင်မာသောဒေသခံမျက်မြင်သက်သေများ ပြောပြချက်အရသိရှိရသည်။
မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်သည် ရသေ့တောင်၊ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ကျောက်တော်၊ဘူးသီးတောင်၊ပလက်ဝ၊ ဒေသများသို့ လူအင်အား၊လက်နက်အင်အားအများအပြားထပ်မံစေလွှတ်နေသောကြောင့် ရခိုင်ဒေသအတွင်းတွင်စစ်ရေးအရှိန်မှာဆက်လက်မြင့်မားလာဖွယ်ရှိသည်။ ယနေ့တွင်လည်း ရသေ့တောင်ဒေသတွင် ဘင်္ဂလီကုလား (၃၀) ခန့်အားရန်သူ့စစ်ကြောင်း နှင့်အတူခေါ်ဆောင်လာသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်။ ဤသည်မှာ လူမျိုးရေးပြဿ နာများကို ဖန်တီးရန်ကြံစည်နေသည်လားဟုသံသယဖြစ်မိပါသည်။ ထို့ကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေဖြင့် အစိုးရစစ်တပ်၏ လှုပ်ရှားသွားလာမှုများကိုသတိထားစောင့်ကြည့်ကြစေလိုပါသည်။
မိမိတို့အနေဖြင့်လည်း ရက္ခိုင့်တပ်မတော်လှုပ်ရှားသည့်နေရာများသို့ အတင်းတိုးဝင်လာသော ရန်သူများအားဆက်လက်ခုခံတိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
သတင်းနှင့်ပတ်သက်၍သိရှိမေးမြန်းလိုသည်များရှိပါက သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ခိုင်သုခ ၊ဖုန်း 0091 8974831239
နှင့် စစ်ရုံးချုပ် ဖုန်းနံပများထံသို့ဆယ်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ လောလောဆယ်တွင် ချွင်းချက်အချို့မှလွဲ၍မိမိတို့အနေဖြင့် ခိုင်သုခ မှလွဲ၍ အခြားသူများအနေဖြင့် ဖြေဆိုခြင်းများမရှိပါ။
Battle News and Arakan-Bangladesh Border War Refugees News
On 12 December 2016, the infantry battalion (314) under the military command (2) of the Arakan Army’s brigade (3) clashed three times withabattalion of the Burma Army (the name under investigation) from 11 a.m. till 13 p.m.
After there had been military tensions between the Arakan Army and the Burma Army since the last month of November,acombined force of the Burma Army entered into the Arakan Army’s controlled area and shelled artilleries indiscriminately even though the fight broke out today. Moreover, the Burma Army detained and tortured more than 20 loggers as they cunningly destroyed some rice bowl of villagers.
Our United League of Arakan (ULA) has provided about 200 Arakanese and other Arakanese-minorities who fled from upper and below-Pe villages after the Burma Army artillery shells felt on their villages foods, healthcare and other necessitated helps for more than one-month as we can. It seems that Arakanese war refugees will increase.
Jackets, blankets and some rations are urgently needed because now is winter season. It is informed that any helper with patriotic spirit can donate to the nearest responsible person of the ULA.
During November and December, there have been minor clashes. In these battles,aprivate of the Arakan Army sacrificed his life for the fatherland of Arakan and its people and another one got injured. It is learnt by the telling of reliable native eyewitnesses that more than 10 were killed from the enemy side andalot were injured.
It is seemed that the aggressive offensives will continue to be increased in the Rakhine area that the Burma government’s army is continually sendingalot of their military forces and reinforced troops to the townships of Rathedaung, Ponnagyun, Kyauktaw, Buthidaung and Paletwa. It is found today that about 30 Bengali Muslims are brought together with the Burma army operation. We doubt that such act is to instigate racial conflicts. Therefore, people should watch with caution the activities of the government’s force.
We will also continue to fight on defense against enemy’s offensive assaults entering into the operation areas of the Arakan Army.
Should you have any enquires on this news, please contact Mr. Khaing Thuka of Information Desk (Phone: 0091 8974831239) and the phone numbers of our military headquarter. Currently, Mr. Khaing Thuka is the only spoke person except for some.
Photos from ရက္ခိုင့်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်-ကယ်ဆယ်ရီးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရီးကော်မီတီ's post
ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ မျိုးချစ်ရက္ခိတများမှ( U.L.A) အဖွဲ့ဝင်များသို့
ဆက်သွယ် လှူဒါန်းမူများအား အထူးကျေးဇူးတင်ဟိပါသည်။
#ရီဘေးသင့်ရခိုင်ပြည်သူများအား ULA/AA မှကူညီထောက်ပံ့ပီးလားမည်#
လက်ဟိ ရခိုင်ဒေသတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ရေကြီးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(United League of Arakan- ULA) အနီနန့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ ULA အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သောအရီးပေါ်အစည်းအဝီးတစ်ခုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ ပြီးနောက်ရခိုင်ဒေသ ရီဘေးကယ်ဆယ်ရီးနန့် ရီဘေးဒဏ်ခံခဲ့ရသောပြည်သူများအတွက် လိုအပ်သည့်အကူအညီများကို ULA/AA မှကူညီထောက်ပံ့ပီးလားမည် ဖြစ်ကြောင်းလေးစားစွာအသိပီးအပ်ပါသည်။
ဖေ့သာထည့်ဝင်ချင်သော လူကြီးမင်းများအနီနန့်အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များအား ဆက်သွယ်၍ ထည့်ဝင်နိုင်ပါသည်။ ယခုဖုန်းနံပါတ်များမှာ ရီဘေးကယ်ဆယ်ရီး (သီးသန့်)နန့်ပတ်သက်၍ ယာယီသုံးစွဲမည့်နံပါတ်များသာဖြစ်ပါသည်။
+1 (515) 664-3924
Photo Credit; MarukU Kingdom
United League of Arakan (U.L.A)
ရက္ခိုင့်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်၊ ကယ်ဆယ်ရီးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရီး ကော်မီတီ (အရေးပေါ်/ရီဘေး) ၏ တတိယအကြိမ် လှူဒါန်းမှူအစီစိုင် (သိန်း ၅၀၀ တန်ဖိုးဟိရေ မြင်းအကောင်ရေ (၂၂) ကောင်အား လယ်ထွန်စက် (၂၀) လုံး)
ရက္ခိုင့်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် U.L.A ရေ ရက္ခိုင့်ရီဘေးကယ်ဆယ်ရီးအတွက် သိန်း (၃၅၀) တန်ဖိုးဟိလူမှုကယ်ဆယ်ရီး အထောက်အပံ့များကို ပထမ နှင့် ဒုတိယအကြိမ်များမှာ ပံ့ပိုးပြီးဖြစ်သည်။ ပထမ နှင့် ဒုတိယအကြိမ်များတွင် ဆန်အိပ် (၂၀၀)၊ မြင်းအကောင်ရေ (၈) ကောင်/ (၂၂) ကောင် အမျိုးအစား လယ်ထွန်စက် (၁၆) လုံး ၊ Honda (၃) လက်မ ရီစုပ်စက် (၁၁) လုံး အသီးသီးကို ကျောက်တော်၊ မင်းပြား၊ မြောက်ဦးနယ်တိက ရီဘေးသင့် ကျေးရွာတိ နန့် ဝံလက်ဖောင်ဒေးရှန်း သို့လွှဲအပ်လှူဒါန်းပြီးဖြစ်ပါရေ။
အဂုတစ်ခါ ရက္ခိုင့်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် U.L.A ၏ တတိယအဖြတ် ကယ်ဆယ်ရီး ကူညီမှူအဖြစ် သိန်း (၅၀၀) တန်ဖိုးဟိရေ မြင်းအကောင်ရေ (၂၂) ကောင်အား လယ်ထွန်စက် (၂၀) လုံးကို လာဖို့အပတ်ထဲမှာ အားဖြည့်ပံ့ပိုးလားဖို့ဖြစ်ပါရေ။ လယ်ထွန်စက် အလုံး (၂၀) ထဲက (၁၃) လုံးကို ဝံလက်ဖောင်ဒေးရှန်းကို လွှဲအပ်ဖို့ဖြစ်ပြီးကေ ကျန်ရေစက် (၇) လုံးကို ရီဘေးသင့် မြို့နယ်ကျေးရွာတိကို လွှဲအပ်လားဖို့ ဟိပါကြောင်း U.L.A အဖွဲ့ဝင်တိနန့် ရက္ခိုင် မိဖပြည်သူရို့ကို အသိပီးအပ်ပါရေ။
ကယ်ဆယ်ရီးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရီး ကော်မီတီ (အရေးပေါ်/ရီဘေး)
ရက္ခိုင့်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်-ကယ်ဆယ်ရီးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရီးကော်မီတီ's cover photo
United League of Arakan (U.L.A) ရက္ခိုင့်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်၊ ကယ်ဆယ်ရီးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရီး ကော်မီတီ (အရေးပေါ်/ရီဘေး) မှ ကူညီထောက်ပံ့မှုများအား အသိပီးကြောငြာခြင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ခသည့် မိုးကြီးရီလျှံမှုကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများစွာဟိခသည်။
ဤသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် အိမ်ခြီ (၁၀၄၈၅) အိမ် မျောပါပျက်စီးခရပြီး၊ ဘေးဒုက္ခရောက်သူဦးရေ (၉၈၀၂၆) ဦး၊ သီဆုံးသူ (၆၃) ဦးဟိခပါသည်။ လယ်ယာမြီဧက စုစုပေါင်း (၂၉၁၂၁၉) ဧက ရီမြုပ်ခံခရပြီး၊ လယ်မြီဧက (၂၇၃၁၅၄) ဧက ပျက်စီးလားကြောင်း အချက်အလက်စုဆောင်းသူများ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ယင်း ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုများအတွက် (U.L.A) ရက္ခိုင့်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်၊ ကယ်ဆယ်ရီးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရီးကော်မီတီ (အရေးပေါ်/ရီဘေး) မှ ပထမအဖြတ်အနီနန့် ဆန်အိပ် (၂၀၀) ကို အရေးပေါ်ထောက်ပံ့ခပါသည်။ ယင်းနောက် ပျက်စီးလယ်ယာမြီများကို ပြန်လည်ထွန်ယက် စိုက်ပျိုးနိူင်ရန် လယ်ထွန်စက်ကြီး (၁၀) လုံး၊ ရီစုတ်စက် (၅) လုံး ( ကျပ် သိန်း ၃၀၀ ရာတန်ဖိုးဟိပစ္စည်းများ) ကို စနစ်တကျသုံးစွဲနိူင်ရန် ၀ံလက်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်း သို့ ပီးအပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနန့် နောက်ထပ်မကြာမှီမှာလည်း ဆက်လက်ပို့ဆောင်လားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပီးကြောငြာအပ်သည်။
.............U.L.A (United League of Arakan) မှ လယ်ထွန်စက်များ ရခိုင်သို့ရောက်ရှိ.............
United League of Arakan (U.L.A) ရက္ခိုင့်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်၊ ကယ်ဆယ်ရီးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရီးကော်မီတီ (အရေးပေါ်/ရီဘေး) မှ ကူညီထောက်ပံ့ထားသော လယ်ထွန်စက်များသည် အဂုအခါ ရက္ခိုင်အခြီစိုက် ၀ံလက်ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ ရောက်လားဗျယ်ဖြစ်ကြောင်း U.L.A - ထောက်ပံ့ကူညီသူ အလှူရှင်များအား အသိပီးအပ်ပါသည်။
လယ်ထွန်စက် (၁၀) စီနန့် ရီစုတ်စက် (၅) လုံးကို ၀ံလက်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်း ပီးအပ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
U.L.A (United League of Arakan) ကယ်ဆယ်ရီးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရီးကော်မီတီ မှ ပြန်လည်ထူထောင်ရီးလုပ်ငန်စဉ်များကို အချိန်မှီ စတင်လုပ်ဆောင်နိူင်ရန် ထိုင်းဘတ်ငွေ (THB) မှ မြန်မာကျပ်ငွေ (MMK) သိန်း (၃၀၀) ကျပ်သို လွဲပြောင်းပြီးဖြစ်ကြောင်း အသိပီးအပ်ပါသည်။
……..U.L.A (United League of Arakan) မှ
HONDA အမျိုးအစား ရီစုတ်စက် အလုံး (၅၀) ကို ထပ်မံထောက်ပံ့လားမည်………
ရက္ခိုင်ပြည်ရီဘေးသင့်ပြည်သူများ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရီးလုပ်ငန်းများတွင် ရေရှည်ရေတိုအသုံးပြုနိူင်ရန်နှင့် လက်ဟိ ရီဘေးကြောင့်ပျက်လားရေ လယ်ယာစိုက်ကွင်းများမှာ ပြန်လည်အစားထိုးထွန်ယက်ရာတွင် မိုးခေါင် -ရီပြတ်လတ်ရှားပါးမှုများကြုံလာရနိူင်၍ အချိန်မှီအရေးပေါ်ရီပီးသွင်းနိူင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရီဘေးသင့်ဒေသအသီးသီးသို့ ရီစုတ်စက် HONDA အမျိုးအစား (၃) လက်မ Pump အလုံးအရေအတွက် (၅၀) လုံးကိုလည်း ဆက်ထောက်ပံ့လားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပီးအပ်ပါသည်။
......ပထမအကြိမ် ဆန်အိပ် (၂၀၀) ပို့ခစဉ်က .......
.....U.L.A မှ ကူညီထောက်ပံ့မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံအချို့ ...
United League of Arakan - ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် အခြီစိုက်နိူင်ငံများမှ လှူဒါန်းထားသော ဆန်အိပ်နန့်အခြားပစ္စည်းများကို လိုအပ်သောနီရာများသို့ ဆက်လက်ပီးပို့လျက်ဟိပြီး၊ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများကိုလည်း အဆင်ပြေရေပိုင်တင်ပြလားပါမည်။
……….. U.L.A (United League of Arakan) ကယ်ဆယ်ရီးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရီးကော်မီတီ မှ လက်ကိုင်လယ်ထွန်စက် (၁၂) လုံးကို ကူညီထောက်ပံ့လားမည်………..
U.L.A (United League of Arakan) ရက္ခိုင့်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်-ကယ်ဆယ်ရီးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရီးကော်မီတီမှဦးဆောင်၍ နိူင်ငံတကာရောက် U.L.A ကိုချစ်သော ရက္ခိုင်လူထုနန့်လက်တွဲညီစွာဖြင့် ရီဘေးကြုံရခိုင်ပြည်သူများ၏ ပြန်လည်ထူထောင်ရီးလုပ်ငန်စဉ်များတွင် အသုံးပြုနိူင်ဖို့ လက်ကိုင်လယ်ထွန်စက် (၁၂) လုံးကို ရီဘေးသင့်နယ်မြီများသို့ ဒေသအလိုက် ဒုတိယအဖြတ် ထောက်ပံ့ပီးအပ်လားများဖြစ်ကြောင်း အသိပီးအပ်ပါသည်။
ကယ်ဆယ်ရီးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရီးလုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်အတွက် U.L.A ကိုချစ်သော မိဘပြည်သူများအနိန်နန့်လည်း စနစ်တကျပူးပေါင်းပါဝင်ကတ်ရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော် အပ်ပါသည်။
U.L.A (United League of Arakan) ရက္ခိုင့်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်-ကယ်ဆယ်ရီးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရီးကော်မီတီမှဦးဆောင်၍ နိူင်ငံတကာရောက် U.L.A ကိုချစ်သော ရက္ခိုင်လူထုနန့်လက်တွဲညီစွာဖြင့် ရီဘေးကြုံရခိုင်ပြည်သူများ၏ ပြန်လည်ထူထောင်ရီးလုပ်ငန်စဉ်များတွင် အသုံးပြုနိူင်ဖို့ လက်ကိုင်လယ်ထွန်စက် (၁၂) လုံးကို ရီဘေးသင့်နယ်မြီများသို့ ဒေသအလိုက် ဒုတိယအဖြတ် ထောက်ပံ့ပီးအပ်လားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပီးအပ်ပါသည်။
รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ရက္ခိုင့်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา